ओलीसँग डर छैन, प्रचण्डको भर छैन, शाह बंश चाहियो : कमल थापा (भिडियो सहित) | ईमाउण्टेन समाचार
काठमाडौं, १३ असार । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी चुनावपछि ओझेलमा परेको छ । अघिल्लो संविधान सभाको चुनावमा राम्रो स्तरको मत पाएको थियो । यसपटक राप्रपालाई निकै कठिन परेको छ । चुनाव भन्दा अगाडी पार्टी टुटफुट र केहि कारणले समस्यामा परेको छ । केहि गठबन्धन गरेपनि त्यस अनुसारको परिणाम चुनावमा आउन सकेन । चुनावपछि राप्रपामा अर्कै खालको बहसले ठाउँ पाएको छ । हिजो फुटेका राजनीतिक दल आज जुट्ने कुरा गरिरहेका छन् । रप्रप्राबाटै फुटेका पार्टीहरु आज जुट्ने र फुट्नेको पछाडी के कारण छ ? जुट्नको लागि के कुराले सहयोग पुर्याउदै छ भन्ने कुरा प्रस्नको विषय बनेको छ । संसदमा सानो आकारले के कुरालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ ? र राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको अबको भूमिका कस्तो रहन्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम ‘खरो प्रस्न’ मा प्रस्तोता प्रकाश गिरीले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग गरेको कुराकानी हेर्नुहोस् :